Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Kalluunka
Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka
Jarmal Portillo | | Aquarium-ka biyaha qabow
Markay tahay helitaanka aquarium, ha ahaato biyo qabow ama biyo kulul, cunsurka ugu weyn ee aan yeelan doonno wuxuu noqonayaa biyo maxaa yeelay waa inaan buuxinnaa quraaradda, iyadoo kuxiran litarrada ay leedahay, biyo. Waxaa jira dad badan oo aan aqoon waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka. Si kastaba ha noqotee, biyuhu badanaa waxay ka mid noqon karaan sababaha ugu waaweyn ee kalluunka u dhinto tanna waxaa u sababi kara biyaha la isticmaalay. Caadi ahaan, dadku waxay isticmaalaan biyaha tuubada si ay u buuxiyaan aquariums-ka, markii ay buuxsamaan, kalluunka ayaan gelinaa laakiin biyahaas waxaa ku jira koloriin iyo koloriin ayaa waxyeello u leh kalluunka oo u horseeda cudur iyo xitaa geerida xoolaha.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan ku sharxi doonnaa waxa ay tahay in lagu isticmaalo aquariums-ka.
1 Maxaa la qaban karaa?
2 Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka: noocyada
2.1 Biyaha tuubada
2.2 Biyo fiican
3 Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-yada: kuwa kale
Dhibaatadan soo food saartay waxaa jira laba xal, oo labaduba ansax ah qaybtayda maxaa yeelay waan isku dayay iyaga. Midka koowaad ayaa ah adoo adeegsanaya shey aad ka heli karto dukaamada xayawaanka. Waa badeecad loo tuuray biyaha si looga takhaluso, daqiiqado gudahood, koloriin ay haysato oo ka dhigaysa mid ku habboon kalluunka inuu ku noolaado. Badeecadani wax badan kuma kacayso waxayna qaadataa waqti dheer.
Xal kale oo la fuliyo ayaa ah tan oo ah in la qaato biyaha ugu yaraan 24-48 saacadood kahor inta aanad biyaha badalin ama buuxin aquarium-ka. Haddii aad biyaha u oggolaato inay saacadahaas taagnaadaan koloriinku way uumi baxaan, biyuhuna durtaba waa u roon yihiin kalluunka. Dhibaatada halkaan ka jirtaa waxay tahay inaad haysatid aquarium-ka litir badan oo aadan rabin inaad yeelato baaldiyo iyo baaldiyo biyo ah oo sugaya inaad awoodo inaad u adeegto buuxinta quraaradda.
Qaarkood waxay qabtaan waxay iibsadaan biyaha macdanta, sidoo kale xal, laakiin badanaa waa qaali (ku dhufo tirada litir ee aad u baahan tahay qiimaha biyaha).
Labada xalka ee ugu horeeya waa kuwa ay suuragal tahay in ay ku jiraan aquariums waaweyn iyo kuwa ka yareyn kara madax xanuun.
Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka: noocyada
Sidaan ognahay, waxaa jira ilo biyood oo kaladuwan oo laga heli karo tas-hiilaadka kalluunkana laga dhigo mid caafimaad qaba Noocyada biyaha ka mid ah ee halkaa ku yaal waxaan haynaa kuwa soo socda
Badanaa waa tan ugu habboon uguna caamsan ee loo isticmaalo aquariums-yada bakhaarka lagu kaydiyo. Tan waxaa ugu wacan fudeydkeeda weyn ee helitaankeeda iyo inaysan lahayn bakteeriya iyo nooleyaal waxyeello u leh nolosha kalluunkayaga. Dhibaatada ka jirta biyaha tuubada ayaa ah in astaamaha qaarkood horey loo saxo. Maadaama biyaha tuubada loogu talagay in dadku cunaan, wuxuu leeyahay astaamo iyo walxo ka hortagey noolaha cudurada keena. Tan waxaa lagu tirtiraa iyadoo ay jiraan walxaha jeermiska dilaa. Xaaladdan oo kale waxaan ka heli koloriin. Koloriinkani wuxuu ka hortagaa bakteeriyada kaladuwan inay ku koraan biyaha kana dhigaan wax la cabi karo.
Isbuunyada Fluval ee...
Maaddooyinka kale ee ay tuubada biyaha qaadi karaan waa chloramines, fluorides ama ozone. Si kastaba ha noqotee, tani caqabad kuma ahan isticmaalka biyaha tuubada. Taasina waa in laga saaro chlorine-ka biyaha tuubada, waa inaan xoogaa ruxnaa oo aan u ogolaanaa 24 saacadood. Koloriinku kaliya wuu uumi baxayaa. Waxaan sidoo kale ka saari karnaa ozone adoo miiraya biyaha shaandhada kaarboon firfircoon. Hab kale ayaa ah isticmaal alaabada sida sodium thiosulfate si aad u baabiiso koloriin. Tan waxaa la sameeyaa haddii aan u baahanahay inaan isla markiiba isticmaalno biyaha.
Maado kale oo khatar badan oo qaadi karta biyaha tuubada isla markaana waxyeelo u leh kalluunka waa naxaas. Badanaa waxay ka timaaddaa tuubooyinka laftooda biyahana way milmaan markay cusub yihiin. Haddii tuubooyinku cusub yihiin oo la qaboojiyey si ay xoogaa gudaha ugu jiraan, naxaasku wuxuu ku milmaa biyaha. Si aad uga saarto naxaasta waad isticmaali kartaa shaandhada kaarboon firfircoon ama u oggolow biyaha inay ka soo baxaan tuubbada daqiiqad ka hor intaadan u isticmaalin biyahaas quraaradda.
Wax soo saarka qaarkood sida flocculants ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa biyaha degmada. Tani waxay u adeegtaa helitaanka biyo cad oo saafi ah waxaana lagu saari karaa dhuxusha firfircoon.
Biyaha laga soo saaro ceelasha sidoo kale waxay leeyihiin faa'iido inay aad u jaban yihiin. Waxaan ku dooran karnaa iyo biyaha noocan ah iyadoo loo eegayo isticmaalka aan siin doonno. Faa'iidada ay leedahay biyahani waa inaysan lahayn koloriin ama walax kale oo jeermis dile ah oo ay tahay in laga saaro. Sidoo kale iyagu badanaa kuma jiraan nooleyaal wax u dhimaya kalluunka. Dhanka kale, qasaarooyinkiisa ayaa ah inay yeelan karto walxo ay tahay inaynu ogaanno sida loo cabiro loona tirtiro iyadoo ku xiran hadba qoto dheerka aan ka soo qaadanno biyaha.
Biyahaani waxay had iyo jeer ka kooban yihiin xaddi xad dhaaf ah oo gaasas la kala diray ah Gaaskaas ka mid ah waxaan ka helnaa kaarboon laba ogsaydh iyo nitrogen. Si looga saaro gaasaskan kala daatay kaliya rux biyaha dhowr saacadood. Dhibaatada kale ee biyaha ceel biyoodka ay soo bandhigi karaan ayaa ah inay leeyihiin xaddi badan oo bir ah. Waxaan si fudud uga saari karnaa birtaan annaga oo hawada marinayna.
Mid ka mid ah astaamaha sababta biyaha ceelka aan si weyn loogu talin haba yaraatee waa inay ku yar yihiin oksijiinta. Haddii aynu kalluun yeelanayno, waxa ugu habboon ayaa ah in biyuhu ay leeyihiin qayb wanaagsan oo oksijiin ah. Waxaa ugu wanaagsan in si xoog leh loo ruxo biyaha saacado yar kahor intaadan isticmaalin. Waa inaan sidoo kale helnaa un ogsijiye Lagu rakibay quraaradda si looga caawiyo oksijiyeerka biyaha.
Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-yada: kuwa kale
Waxaa jira biyo kale oo, in kastoo aan sidaa loogu talin, loo isticmaali karo dhib la'aan. Kaliya waa inaan sifiican u ogaano xuduudaha iyo astaamaha si aan ugu dhajino waxa quraaradda ubaahantahay. Biyaha roobka oo iyaga ka mid ah. Waxaan keydin karnaa biyaha roobka si aan u isticmaalno markasta oo aan sugno inuu roob da'o. Tan waxaa loo sameeyaa tan iyo markii aan ka heli karno biyaha iyada oo aan wax walax ah ka helin jawiga maadaama ay horay u soo degtay. Sidoo kale waa inaad sugto saqafyada iyo marinnada biyaha laga nadiifiyo.
Biyaha roobka waxay leeyihiin astaamo aad u jilicsan. Taasi waa, waxay la mid tahay biyaha osmosis ama biyo demineralized. Ujeeddadu waa in la isticmaalo miiraha kaarboon firfircoon si loo hubiyo in biyuhu yeelan doonaan tayo wanaagsan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa biyaha looga isticmaalo aquariums-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka
Maqaalkan waxay muhiimad siiyeen Chloramines-ka waana inaad aad uga taxaddartaa iyaga.
Daawooyinka bogsashada ee kalluunka likaha